Kulanka Taariikhiga ah ee Erdogan iyo Boqor Salmaan | HimiloNetwork
Posted by: Zakariya in Dunida Muslimka November 17, 2015	0 256 Views
Istanbul, Turkey (Himilonews) – Intii lagu guda-jiray shirka G20 Summit, kulan gaar ah oo waqti fiican qaatay ayaa waxaa isku dhinac arkay madax-weynaha Turkiga Rayib Dayib Erdogan iyo hoggaanka Sucuudiga Boqor Salmaan.
Kulanka laba ma’suul ayaa waji cusub oo xiriir wanaag iyo diblomaasi ah u furay labada dal kuwaas oo muddo ku dhow 40-sano uusan dhex-marin xiriir sal adag.
Madaxweyne Erdogan wuxuu muujiyay sida uu ula dhacsan yahay xiriir sal adag oo ay la yeeshaan Sucuudiga–maadaama uu yahay billadayaha Muslimiinta.
Si lamid Erdogan, boqor Salmaan ayaa muujiyay sida ay muhiim u tahay helidda laba dal oo walaalo ah kuwaas oo iskaashi xooggan wada yeehsha–si ayuu yiri: “Loo helo xalka mushkiladaha ka aloosan bariga dhexe sida Ciraaq, Siiriya, Palastine iyo dunida Muslimka.”
Xiriirka labada ayaa dhawaanahan fiicnaaday kolkii boqorka Salmaan uu xilka ku fadhiistay. Boqorkii hore ee Sucuudiga boqor Cabdallah–kaas oo la dhacsanaa inqilaabkii lagu riday madax-weynihii Masar ee Maxamed Musri–ayaa waxaa ka hor yimid madaxweyne Erdogan oo taageero u fidiyey lakabyada ugu sarreeye Ururka Walaalaha Muslimiinta ee talada hayay; taas oo sababtay in xiriirkii Booca-ku-tukubayey ee labada dal uu sii nuglaado.
Dadka siyaasadda darsa ayaa tallaabadan ku tilmaamaya mid horseedi karta dhalashada xiriir dhumuc leh oo ay yeeshaan dalalka Muslimiinta. Maadamaa labada dal ay door muhiim ah ku leeyihiin dunida Muslimka.
Si kastaba, tani ma ahan mid ay soo dhaweynayaan Ururka Cilmaaniga ee Turkiga–kaas oo looga guuleystay doorashooyinkii ugu dabeeyey. Halka dalalka Iiraan, Israel iyo reer Galbeedka ay walaac dahsoon ka muujinayaan kulanka labada madax.
Previous: IS oo u goodisay Washington
Next: Xuska Toddobaadka Macalinka iyo doorka Bulshada